Kuberekwazve Kwekutsvakurudza Kuberekwazve Kwemhosva Nyaya yaCarrie Chapman Catt | Kamala Harris: Vakadzi vezvematongerwo enyika Vanodzivirira muHupenyu Haviri - Kuberekwazve Kwekutsvagisa
Zvakazarurwa ne: Mweya Kuva Ahtun Re mune Ryerson-Semkiw Kuberekwazve Kwekutsvakurudza Session
Dzvanya pamifananidzo kuti uwedzere kuwedzera
apo Kamala Harris akapinda mudanho renyika nekuva mukadzi wekutanga, uyezve munhu wekutanga ane ruvara, kuti ave Mutevedzeri weMutungamiri weUnited States, zvaive zvakajairika kushamisika kuti angave angave ani muhupenyu hwapfuura.
Ndakashanda pamwe nechitendero chemasimire Kevin Ryerson kubvira 2001. Ndakaona kuti Kevin nzira dzekutungamira mweya dzinonzi Ahtun Re uyo aratidzira kugona kwekuita hupenyu hwapashure macheti nehuremu hwakanyanya hwechokwadi.
Muchikamu naKevin, ndakabvunza Ahtun Re uyo Kamala angave anga ari munguva yeupenyu hwapfuura. Mushure menguva yekufungisisa, Ahtun akandiudza kuti Kamala Harris aive zana regumi nemapfumbamwe muzana American suffragette uyo aive akazvipira kumisikidza kodzero yevakadzi yekuvhota. Akandiudza kuti zita rake raienderana ne "Carrie."
Mushure mekuita zvishoma zvekutsvaga paInternet, ini ndakawana anokwanisa kukwikwidza. Carrie Chapman Catt akaberekwa muna 1859 uye akafa muna 1947. Aive mutungamiri anoshingairira uyo akarwira 19th Amendment, iyo yakapa vakadzi muUnited States kodzero yekuvhota muna 1920.
Mhosva yakabatana ndeiyi: Hupenyu Hwekare hwaJoseph Biden
Kuti uongorore dzimwe nyaya dzakafanana, ndapota enda ku:
Kuberekwazve Kwemhosva Dzinosanganisira Vezvematongerwo enyika
Chirongwa cheMweya muKuberekwa kweMweya: Uku ndiko kufanana kwekuvakwa kwechiso kwaCarrie Chapman Catt naKamala Harris.
Pasika Hupenyu Passions, Tarenda uye kugona: Kuda kwekusimudzira nzanga kunoonekwa muhupenyu hwaCarrie naKamala.
Shanduko yeRace muKuberekwazve Kwemakore: Carrie Chapman Catt aive muCaucasian, uku Kamala Harris akaberekwa kuna amai vanobva kuIndia uye baba vemadzitateguru eAfrica.
Iko kucherechedza uko vanhu vanogona chinja rudzi uye dzinza kubva kune imwe nguva yeupenyu kuenda pane imwe inogona kubatsira kugadzira nyika ine runyararo, sezvo hondo zhinji nemakakatanwa akavakirwa pamisiyano muaya mamaki ehunhu.